Automatic chando bhokisi evästeet zvakagadzirirwa Cookies kuita muchina - China Shanghai Hanjue Machinery
Automatic chando bhokisi evästeet zvakagadzirirwa evästeet nokuparira Machine
Description: The akagadzira kudzayi inogona customized nezvirwere zvakagadzirwa. Zvinoita sokuti nzira dzakawanda kuti kudzayi, vamwe zvitoro zviduku uye Madzimai epamusha kuti chikafu noruoko, ine chinoshamisa mutengo uye zvakasiyana zera vanhu vakaita chikafu ichi. Chinofadza ndechokuti wedu HJ-860 encrusting muchina anogona kuita zvokudya dzakakwirira vachikwanisa. injiniya wedu kuchawedzera imwe waya chekawo pamusoro muchina kuita makeke, seizvi anogona kuponesa mari uye kuita zvakanaka chitarisiko makeke. Unogona baya vhidhiyo ona kuti muchina anoshanda ane ...
The akagadzira kudzayi inogona customized nezvirwere zvakagadzirwa. Zvinoita sokuti nzira dzakawanda kuti kudzayi, vamwe zvitoro zviduku uye Madzimai epamusha kuti chikafu noruoko, ine chinoshamisa mutengo uye zvakasiyana zera vanhu vakaita chikafu ichi.
Chinofadza ndechokuti wedu HJ-860 encrusting muchina anogona kuita zvokudya dzakakwirira vachikwanisa. injiniya wedu kuchawedzera imwe waya chekawo pamusoro muchina kuita makeke, seizvi anogona kuponesa mari uye kuita zvakanaka chitarisiko makeke. Unogona baya vhidhiyo ona kuti muchina mabasa uye matambudziko chero tapota nyorera okutengesa edu.
nhamba Model HJ-860
chinzvimbo 5000-6000pcs / h
Product uremu 5-200g / yori
Lead nguva Mukati 7 kushanda mazuva kana 1 yakatarwa Machine
divi 167 * 92 * 129cm
Machine uremu 400kg
1) Protection Covers uye Emergency Stop Button kuti njodzi oparesheni.
2) Weight, ukuru uye goko-zvekupfakira-reshiyo inogona kugadziridzwa nyore sezvo kunodiwa.
3) Multipurpose: hunomubatsira kuti kubudisa mhando dzakasiyana zvokudya nokuchinja anoumba nyore.
4) Big chinzvimbo
1) Mhando dzakawanda Cookies anoumba zvinogona yakagadzirwa.
2) customized muchina, tinogona kuwedzera zvimwe muchina enyika pamusoro muchina.
3) Chirungu, Chinese, mutauro Arabic vari hako ..
4) Kurovedza tichasunungurwa kupiwa kana vatengi yokuedzwa muchina.
Previous: Automatic aizikirimu mochi nokuparira Machine
Next: Automatic hove bhora nyama bhora kuita muchina